Fingering in Sex - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” လကျခြောငျးကလေးမြား ရိုးတိုးရှတ လိငျမှုကိစ်စ “
ခေါငျးစီးကို ကွညျ့ပွီး “ဇီဝကတဈယောကျ ညဈတီးညဈပတျတှေ ရေးလိမျ့မယျ” လို့ ထငျမိကွမှာပါ ။အမှနျက မဟုတျပါဘူး ။ပုထုစဉျ လူသားတှမှော ခဈြမှု
ရေးရာ လိငျမှုရေးရာတှကေ ရှောငျလှဲမရတဲ့ ဖွဈရိုးဖွဈစဉျပါ ။မိမိတို့ တဈကိုယျတညျးသျောလညျးကောငျး ၊ခဈြခငျရသူနဲ့သျောလညျးကောငျး စိတျကနြေပျမှု ရှာဖူးကွမှာပါ။ဒါပမေယျ့ ဇီဝကတို့နိုငျငံရဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ဓလထေုံ့းတမျးတှကွေောငျ့ ရှကျဖှယျကိစ်စတဈခုအဖွဈ လိငျမှုရေးရာကို အမွငျရှိကွပါတယျ ။ဒါကွောငျ့ မိဘနဲ့သားသမီး ၊ညီအဈကို မောငျနှမသားခငျြးတှကွေားမှာလညျး ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောလပွေ့ောထမရှိတတျကွပါဘူး ။ဒါကွောငျ့ တခြို့သူတှမှော လိငျကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ကနျြးမာရေးအမွငျမရှိတာကွောငျ့ ဒုက်ခမြားကွရပါတယျ ။ဒီဆောငျးပါးလေးမှာ fingering လို့ချေါတဲ့ လိငျမှုကိစ်စမှာ လကျခြောငျးကလေးမြား အသုံးပွုပွီး တဈကိုယျရညျအာသာဖွခွေငျးနဲ့ မိမိရဲ့ကွငျဖကျကို ကနြေပျမှုပေးစခွေငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ကနေ ပွောပွမှာပါ ။
Fingering in Sex လိငျမှုရေးရာမှာ လကျခြောငျးကလေးမြားကို အသုံပွုခွငျးဆိုတာ ဘာလဲ?
လိငျမှုရေးရာမှာ လကျခြောငျးကလေးမြားကို အသုံးပွုပွီး သာယာကနြေပျမှုကို ဖွဈစတောကို ဆိုလိုတာပါ ။
ခဈြခငျရငျးနှီးမှုကို တိုးစပေါတယျ ။
ဘယျနရောတှကေို လကျခြောငျးကလေးမြား အသုံးပွုပွီး လှုံ့ဆျောပေးလို့ရသလဲ?
အမြိုးသမီးတှမှော ဆိုရငျ မိနျးမကိုယျအပွငျဘကျ(အထူးသဖွငျ့ clitoris လို့ချေါတဲ့အဖုကလေး) ၊မိနျးမကိုယျအထဲ(အထူးသဖွငျ့ G spot လို့ချေါတဲ့နရောကလေး) ၊စအိုအထဲနဲ့ စအိုပတျခြာလညျ ၊နို့သီးခေါငျးနဲ့ နို့သီးခေါငျးပတျခြာလညျ
အမြိုးသားတှမှောဆိုရငျ လိငျတံ(အထူးသဖွငျ့ လိငျတံထိပျဖြားရှိ မှိုပှငျ့သဏ်ဍနျ Glans
Penis) ၊စအိုအထဲနဲ့ စအိုပတျခြာလညျ
အထကျပါနရောတှမှော အာရုံခံ နာ့ဗျကွောတှေ အမြားကွီးရှိလို့ပါ ။ဒါကွောငျ့အထကျပါနရောတှကေို လှုံ့ဆျောပေးရငျ လိငျကိစ်စမှာ ကနြေပျမှု ရတတျကွပါတယျ ။
ကနျြးမာရေးအရ ဘာတှေ သိထားဖို့လိုမလဲ?
လကျခြောငျးကလေးတှကေို လကျသညျး ညှပျထားဖို့လိုပါ့မယျ ။
လကျခြောငျးကလေးတှကေို သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးထားဖို့ လိုပါ့မယျ ။
လကျသညျး အတုတှေ ခြှတျထားသငျ့ပါတယျ ။အခနျ့မသငျ့ရငျ မိနျးမကိုယျထဲ ၊စအိုထဲ ကနျြခဲ့ပွီး ဒုက်ခမြားနိုငျပါတယျ ။
ခြောဆီသုံးပွီး အထကျပါနရောတှကေို လှုံ့ဆျောပေးသငျ့ပါတယျ ။
ခြောဆီ မသုံးက ပှတျတိုကျမှုမြားဖွဈကာ ဒဏျရာအနာတရဖွဈ ၊လကျသညျး မညှပျထားက အနာတှပေိုဖွဈတတျ ၊ မသနျ့တဲ့ပိုးတှေ ၊အရပွေားက ပိုးတှေ ဝငျသှားနိုငျပါတယျ ။
လကျခြောငျးကလေးမြားကို အသုံးပွုပွီးပါက သခြော ဆပျပွာနဲ့ စငျကွယျစှာ ဆေးကွောပါ ။
” လက်ချောင်းကလေးများ ရိုးတိုးရွတ လိင်မှုကိစ္စ “
ခေါင်းစီးကို ကြည့်ပြီး “ဇီဝကတစ်ယောက် ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ ရေးလိမ့်မယ်” လို့ ထင်မိကြမှာပါ ။အမှန်က မဟုတ်ပါဘူး ။ပုထုစဉ် လူသားတွေမှာ ချစ်မှု
ရေးရာ လိင်မှုရေးရာတွေက ရှောင်လွှဲမရတဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ ။မိမိတို့ တစ်ကိုယ်တည်းသော်လည်းကောင်း ၊ချစ်ခင်ရသူနဲ့သော်လည်းကောင်း စိတ်ကျေနပ်မှု ရှာဖူးကြမှာပါ။ဒါပေမယ့် ဇီဝကတို့နိုင်ငံရဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကြောင့် ရှက်ဖွယ်ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ် လိင်မှုရေးရာကို အမြင်ရှိကြပါတယ် ။ဒါကြောင့် မိဘနဲ့သားသမီး ၊ညီအစ်ကို မောင်နှမသားချင်းတွေကြားမှာလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောလေ့ပြောထမရှိတတ်ကြပါဘူး ။ဒါကြောင့် တချို့သူတွေမှာ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးအမြင်မရှိတာကြောင့် ဒုက္ခများကြရပါတယ် ။ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ fingering လို့ခေါ်တဲ့ လိင်မှုကိစ္စမှာ လက်ချောင်းကလေးများ အသုံးပြုပြီး တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနဲ့ မိမိရဲ့ကြင်ဖက်ကို ကျေနပ်မှုပေးစေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေ ပြောပြမှာပါ ။
Fingering in Sex လိင်မှုရေးရာမှာ လက်ချောင်းကလေးများကို အသုံပြုခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ?
လိင်မှုရေးရာမှာ လက်ချောင်းကလေးများကို အသုံးပြုပြီး သာယာကျေနပ်မှုကို ဖြစ်စေတာကို ဆိုလိုတာပါ ။
ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို တိုးစေပါတယ် ။
ဘယ်နေရာတွေကို လက်ချောင်းကလေးများ အသုံးပြုပြီး လှုံ့ဆော်ပေးလို့ရသလဲ?
အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆိုရင် မိန်းမကိုယ်အပြင်ဘက်(အထူးသဖြင့် clitoris လို့ခေါ်တဲ့အဖုကလေး) ၊မိန်းမကိုယ်အထဲ(အထူးသဖြင့် G spot လို့ခေါ်တဲ့နေရာကလေး) ၊စအိုအထဲနဲ့ စအိုပတ်ချာလည် ၊နို့သီးခေါင်းနဲ့ နို့သီးခေါင်းပတ်ချာလည်
အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင် လိင်တံ(အထူးသဖြင့် လိင်တံထိပ်ဖျားရှိ မှိုပွင့်သဏ္ဍန် Glans
Penis) ၊စအိုအထဲနဲ့ စအိုပတ်ချာလည်
အထက်ပါနေရာတွေမှာ အာရုံခံ နာ့ဗ်ကြောတွေ အများကြီးရှိလို့ပါ ။ဒါကြောင့်အထက်ပါနေရာတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးရင် လိင်ကိစ္စမှာ ကျေနပ်မှု ရတတ်ကြပါတယ် ။
ကျန်းမာရေးအရ ဘာတွေ သိထားဖို့လိုမလဲ?
လက်ချောင်းကလေးတွေကို လက်သည်း ညှပ်ထားဖို့လိုပါ့မယ် ။
လက်ချောင်းကလေးတွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားဖို့ လိုပါ့မယ် ။
လက်သည်း အတုတွေ ချွတ်ထားသင့်ပါတယ် ။အခန့်မသင့်ရင် မိန်းမကိုယ်ထဲ ၊စအိုထဲ ကျန်ခဲ့ပြီး ဒုက္ခများနိုင်ပါတယ် ။
ချောဆီသုံးပြီး အထက်ပါနေရာတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးသင့်ပါတယ် ။
ချောဆီ မသုံးက ပွတ်တိုက်မှုများဖြစ်ကာ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ် ၊လက်သည်း မညှပ်ထားက အနာတွေပိုဖြစ်တတ် ၊ မသန့်တဲ့ပိုးတွေ ၊အရေပြားက ပိုးတွေ ၀င်သွားနိုင်ပါတယ် ။
လက်ချောင်းကလေးများကို အသုံးပြုပြီးပါက သေချာ ဆပ်ပြာနဲ့ စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပါ ။